China Factory Wholesale ara-barotra endrika volom-bolo vita amin'ny alim-bary vita amin'ny alim-bolo vita amin'ny alimika klasika Retro Bistro azo amidy latabatra fisakafoana seza fampakaram-bady sy mpamatsy | Sun Master
Factory Wholesale ara-barotra endrika volom-borona antonony Aluminium Frame seza Classical Metal Retro Bistro Stackable fisakafoana latabatra seza fampakaram-bady
Model No.: WA － 1123
Loadability: 855pcs / 40'HQ
Marika MASTERAKA MASINA Loadability 855pcs / 40'HQ
Fitaovana lehibe Aluminium fantsona Dia.28xT1.5mmVitan'ny fahagola tamin'ny famaranana ny vovoka
paty tongotra plastika mainty
Seza aluminium 1.Full, famaranana fahagola amin'ny firakotra vovoka any ivelany. Ny famolavolana volom-borona vita tanana dia manome fomba hafa ho an'ny trano fisakafoanana, hotely, cyber café, patio ary efitrano fandraisam-bahiny.
Ny famafana sy ny poloney tonga lafatra dia mahatonga azy ho tsara tarehy amin'ny tara-masoandro. Ny seza alimo any ivelany dia maivana miaraka amin'ny matanjaka. Araka ny fantatsika, ny metaly dia mety ho harafesina raha iharan'ny toetr'andro mando. Ny firakotra vovoka no fomba tsara indrindra haharetana maharitra ambonin'ny tany, ary azo ampiasaina mandritra ny 15 taona tsy misy olana.
Anti-oxidation, mampiasa fitaovana maivana sy fiarovana ny tontolo iainana. Fiainana maharitra azo iainana, mahazaka hatramin'ny 100KG.
Vokatra 2.Green: fikolokoloana tsy maharitra, maharitra ary mora, tsy miova loko, azo sasana, maivana ary mora mihetsika.
3.Can azo ampiasaina anatiny sy ivelany.
Zaridaina, Patio, hetsika, fampakaram-bady, fanofana, fety, Pub, Bistro, trano fisakafoanana,
Efitra fisakafoana, efitrano fandraisam-bahiny, hotely, klioba, fisotroana, fifanarahana, vahoaka, kafe, varotra,
Sakafo, fandraisam-bahiny, lakozia, kianja, boribory, buffet, cineen, bench, sakafo haingana,
Fanaka an-tsekoly sns.
4.Size sy loko azo namboarina, Design mahaliana, vidin'ny mifaninana, ahazoana aina, kanto sy maharitra. Ny orinasa dia manome ny vokatra namboarina sy ny serivisy OEM. Fanangonana sy famolavolana vaovao isan-karazany no mivoaka isam-bolana miaraka amin'ireo fomba sy lamba ankehitriny. Manana ny fahaiza-manao sy ny milina nohavaozina ny orinasa.
Ireto avy ny fanaka ivelany:
1) fisafidianana henjana ho an'ny akora toy ny aliminioma sy vy tsy miovaova hahazoana antoka ny kalitao tsara indrindra hatramin'ny voalohany
2) porofo amin'ny rano, fanoherana ny oram-panala, porofon'ny toetr'andro mando
3) UV aosaly voaaro UV miaraka amin'ny lamba matevina matevina haingana
4) Fitaovana sy firafitry ny tontolo iainana
5) Namboarina ho an'ny sary famantarana ny haben'ny loko sy ny fepetra takiana manokana
Manana mpiara-miombon'antoka orinasa marobe manerana an'izao tontolo izao izahay mandritra ny taona maro mifandimby. Mpamatsy fanaka ho an'ny 500 ambony izahay.
Ry namako malala, raha tianao ny santionany maimaimpoana, ny katalaogy misy ny lisitry ny vidin'ny endrika farany. Aza misalasala mifandray aminay amin'ny mailaka:terry@sunmaster.cn susan@sunmaster.cn Faly kokoa izahay manome fanampiana.
Teo aloha: Chaise Lounge ivelan'ny trano fanaka vita amin'ny vy fanaka vita amin'ny vy amin'ny tadin-tsolika taolam-paty miaraka amin'ny Ottoman ho an'ny beach Poolside Garden
Manaraka: Tady ivelan'ny trano maoderina manenona sofa napetraka 4-Piece Aluminium Cast Frame Patio Resadresaka seza miaraka amin'ny ondana ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny marobe.
Mavesatra maivana maharitra maharitra Patio Furni ...
Orinasa ambongadiny endrika varotra varotra maro loko ...
Factory mpanamboatra Modern Design Stackable Ra ...
Ny haavon'ny haavo an-kalamanjana azo ovaina ...
Toeram-pisakafoanana alika Retro Bar Retro ...